Idatha yokudluliselwa kwe-DataKit iPhone - ikhophi idatha phakathi kwe-iPhone, i-iPad neKhompyutha
Idatha yedatha ye-iPhoneKit
Dlulisa izithombe, oxhumana nabo, umculo, imilayezo, amavidiyo nokuningi kumadivayisi wakho we-iOS.
Dlulisa imininingwane phakathi kwe-iTunes ⇔ iDevice, i-Computer ⇔ iDevice, iDevice ⇔ iDevice.
Dlulisa idatha phakathi kwe-iPhone, i-iPad namakhompyutha ngaphandle kwe-iTunes.
Compatible with iOS 14 and iPhone 12.
Ongakudlulisa phakathi kwe-iPhone, i-iPad neKhompyutha nge-iPhone Transfer
Dlulisa izinhlelo zokusebenza
Dlulisa Umculo phakathi kwama-iPhones ahlukene neKhompyutha ngokungenisa nokuthumela amafayela alalelwayo kusuka / kuya kumafolda kufaka phakathi Umculo, iTunes U, Ama-podcasts, Amaculo, Amabhuku alalelwayo, Uhlu lwadlalwayo.
Ungadlulisa amafayela wevidiyo kusuka / kuya kwizigaba kufaka phakathi Ama-movie, Amavidiyo womculo, Amavidiyo wasekhaya, Imibukiso ye-TV, iTunes U, Ama-podcasts.
Ungadlulisa amafayela ezithombe kusuka / kuya kwizigaba kufaka phakathi Amavidiyo, sikrini, Ukujula Komphumela, Ilabhulali yezithombe.
Kwiphaneli yolwazi ungadlulisa ukuthintana kwefoni nemiyalezo.
Ngenisa Oxhumana Nabo: Thayipha ngaphakathi noma udlulise oxhumana nabo kwikhompyutha kusuka kufayela le-Vcard, ifayela le-CSV, ibhuku lamakheli leWindows, i-Outlook 2010 / 2013 / 2016.
Thekelisa Oxhumana nabo: Thumela othintana nabo kwikhompyutha kufayela le-Vcard, ifayela le-CSV, Incwadi Yamakheli ye-Windows, i-Outlook 2010 / 2013 / 2016.
SMS: Thumela ku-HTML, CSV, TEXT.
Faka uHlelo ku-iPhone noma kwi-iPad yakho ngokungenisa izinhlelo zokusebenza kusuka kukhompyutha.
Dlulisa uhlelo lokusebenza kwikhompyutha ukuze wenze amafayela wesipele.
Ungafinyelela into ethile ngokusesha.
Akunandaba ukuthi uyaphi futhi nemithombo, Dlulisa Idatha ngokukhululeka
Ungadlulisa amafayela phakathi kwamadivaysi ahlukahlukene ngokukhululekile kufaka phakathi kwe-iTunes ne-iPhone / i-iPad / i-iPod, phakathi kwekhompyutha ne-iPhone / i-iPad / i-iPod, phakathi kwe-iPhone / i-iPad / i-iPod ne-iPhone / i-iPad / iPod ngisho ne-iPhone X entsha ehambisanayo.
Izinhlobo zefayela ezisekelwayo: Umculo, uhlu lwadlalwayo, amavidiyo, ama-podcasts, i-iTunes U, imibukiso ye-TV, ama-Audiobooks nokuningi.
Dlulisa kalula umculo, izithombe, ividiyo, oxhumana nabo, imilayezo nokuningi phakathi kweWindows / Mac PC ne-iOS yedivayisi.
Amadivayisi we-iOS Devices⇔iOS
Yebo, ungadlulisa nedatha phakathi kwama-iPhones ahlukene, i-iPad ehlukile ne-iPod Touch ehlukile.
Isiphequluli sefayela le-iPhone, i-Explorer kanye ne-Manager
Phequlula futhi uphathe idatha ye-iPhone njengokuhlola ifayela kwikhompyutha. Ngenisa futhi uthumele amafayela ngokukhululeka kusuka kwikhompyutha kuya ku-iPhone noma kusuka ku-iPhone kuya kwikhompyutha.
Izinyathelo ze-3 zokudlulisa izithombe. Amavidiyo, Oxhumana Nabo, i-SMS phakathi kwamadivayisi ngokukhululeka futhi kalula.
Isinyathelo 1 - Xhuma i-iOS yedivayisi ku-PC
Isinyathelo 2 - Khetha Imodi yokuGuqula
Isinyathelo 3 -Select to yokungenisa noma ukuthekelisa Amafayela
Zama Ukudluliswa Kwe-DataKit ye-iPhoneK mahhala manje!
Dlulisa Izithombe, Imilayezo, Oxhumana Nabo, Ividiyo, Izincwadi futhi uhlole ama-iPhone fles.
Ungasidlulisela Kanjani Izithombe ukusuka ku-Khompyutha kuya ku-iPhone 6 / 7 / 8 / X (Plus) (Ibuyekeziwe i-2018)
Ungasidlulisela Kanjani Izithombe ukusuka ku-iPhone ukuya kwikhompyutha (i-2steps) (Ibuyekezwe i-2018)
Dlulisa Izinhlobo Izinhlobo